NGWA IGWE NA BLUESTACKS - BLUESTACKS - 2019
Teknụzụ ikuku, gụnyere WI-FI, abalarị ogologo oge na ndụ anyị. O siri ike iche n'echiche nke oge a na ndị mmadụ anaghị eji ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka jikọọ n'otu ebe. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọnọdụ na-ebili mgbe Wi-Fi gbanyụrụ "na ebe kachasị mmasị", nke na-akpata ụfọdụ nkasi obi. Ihe ọmụma nke enyere n'isiokwu a ga - enyere aka dozie nsogbu a.
WI-FI nwere nkwarụ
Enwere ike ijikọta ihe dị iche iche na ọnọdụ dị iche iche. Ọtụtụ mgbe, Wi-Fi na-apụ n'anya mgbe laptọọpụ na-apụta na ọnọdụ ụra. Enwere ọnọdụ na mkparịta ụka na-agbaji n'oge ọrụ, na, n'ọtụtụ ọnọdụ, iji weghachite njikọ ahụ, a chọrọ reboot laptọọpụ ma ọ bụ rawụta.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ọdịda dị otú a:
Nsogbu na ụzọ mgbaàmà ma ọ bụ anya dị anya site na ebe ịbata.
Enwere ike igbochi gị na ọwa nke router, nke gụnyere netwọk wireless netwọk.
Ntọala atụmatụ ezighi ezi (n'ọnọdụ ọnọdụ ụra).
Ndapu na WI-FI-router.
Ebumnuche 1: Ebe ntinye ugbo na nsogbu
Anyị malitere iji ihe a kpatara ezi ihe kpatara ya, ebe ọ bụ na ọ bụ ya na-eduga ngwa ngwa na ngwaọrụ ahụ na netwọk. Ihe mgbochi dị n'ụlọ ahụ bụ mgbidi, karịsịa ndị isi obodo. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke mgbaàmà ahụ gosipụtara nanị nkewa abụọ (ma ọ bụ otu ma ọ bụ otu), nke a bụ ikpe anyị. N'okpuru ọnọdụ ndị dị otú a, ọ ga-eme ka onye ọ bụla na-eje ozi ruo mgbe ọ na-apụ apụ nwa oge - budata ọnụ ala, vidiyo na ihe ndị ọzọ. A na-ahụ otu omume ahụ mgbe ị na-esi na router na-aga n'ebe dị anya.
Ị nwere ike ime ihe na-esonụ na ọnọdụ a:
Ọ bụrụ na o kwere omume, gbanwee netwọk na ọkọlọtọ 802.11n na ntọala nke router. Nke a ga - eme ka ọnụọgụ mkpuchi yana ọnụọgụ data. Nsogbu bụ na ọ bụghị ngwaọrụ niile nwere ike ịrụ ọrụ na ọnọdụ a.
Gụkwuo: Ịhazi TP-LINK TL-WR702N rawụta
Zụrụ ngwaọrụ nke nwere ike ịrụ ọrụ dị ka nlọghachi (nlọghachi ma ọ bụ nanị "ntinye" nke mgbaàmà WI-FI) ma debe ya na mpaghara na-adịghị ike.
Bịaru nso na router ma ọ bụ jiri dochie ya.
Ebumnuche nke 2: Mgbochi
Ntanye anya ntanetị nwere ike ime ka netwọk ikuku na ngwaọrụ eletriki. Site na ihe mgbaàmà na-enweghị mgbagha site na onye ntanetị, ha na-edugakarị nkwụsị. Enwere ihe ngwọta abụọ:
Wepu ihe ntanetị site na ntanetị nke electromagnetic - ngwa ngwa nke ụlọ na-ejikarị na netwọk ma ọ bụ na-eri oge ọzọ (friji, ngwa ndakwa nri, kọmputa). Nke a ga-ebelata mgbapụta mgbaàmà.
Gbanwee na ozo ọzọ na ntọala. Ị nwere ike ịchọta ọwa na-erughị ala na random ma ọ bụ na WiFiInfoView n'efu.
Na TP-LINK routers, gaa na ihe menu "Ntọala Ndenye".
Wee họrọ ọwa chọrọ na listi ndọpụta.
Maka mmekọrịta D-Link yiri: na ntọala ịchọrọ ịchọta ihe ahụ "Ntọala Ntọala" na ngọngọ "Wi-Fi"
ma gbanwee gaa na akara kwesịrị ekwesị.
Ebumnuche nke 3: Ntọala Nchekwa Ike
Ọ bụrụ na ị nwere onye rawụta siri ike, niile ntọala ahụ ziri ezi, mgbaàmà ahụ kwụsiri ike, ma laptọọpụ ahụ efunahụ netwọk mgbe ị na-apụ na ezumike, nsogbu dị na ntọala nke atụmatụ ike Windows. Usoro ahụ na-ekpuchi ihe nkwụnye ahụ mgbe ọ na-ehi ụra wee chefuo iji mee ka ọ laghachi. Iji kpochapụ nsogbu a, ịkwesịrị ịme usoro omume.
Gaa "Ogwe njikwa". Ị nwere ike ime nke a site na ịkpọ menu. Gbaa ọsọ keyboard mkpirisi Nweta + R na ide iwu
Na-esote, setịpụ ihe ngosi dị ka obere akara ngosi ma họrọ vidiyo kwesịrị ekwesị.
Mgbe ahụ soro njikọ ahụ "Ịmepụta Atụmatụ Ike" usoro a na-emegharịghị.
N'ebe a, anyị chọrọ njikọ na aha ahụ "Gbanwee ntọala ikike dị elu".
Na windo meghere anyị na-emeghe otu "Ntọala Ntọala Ikuku" ma "Ọnọdụ Nchekwa Ike". Họrọ uru site na listi ndapụta. "Ọrụ kachasị elu".
Tụkwasị na nke a, ịkwesịrị igbochi usoro ahụ iji kwụpụ ihe nkwụnye ahụ iji zere nsogbu ndị ọzọ. A na-eme nke a "Onye njikwa ngwaọrụ".
Họrọ ngwaọrụ anyị na alaka ụlọ ọrụ "Ndị nkwụnye netwọk" ma gaa n'ihe onwunwe ya.
Ọzọ, na nchịkwa ike njikwa, kpochie igbe nke na-enye gị ohere gbanyụọ ngwaọrụ ịchekwa ike, ma pịa OK.
Mgbe manipulations mere, laptọọpụ kwesịrị ịmalitegharịa.
Ntọala ndị a na-enye gị ohere ijide ihe nkwụnye ọkụ ikuku mgbe niile. Echegbula, ọ na-ere ọkụ eletrik.
Ebumnuche 4: Nsogbu na ihe ntanetị
Ọ dị nnọọ mfe ịchọta nsogbu ndị dị otú ahụ: njikọ ahụ anaghị adị na ngwaọrụ niile n'otu oge, ọ bụ naanị mmalite nke router ga-enyere aka. Nke a bụ n'ihi na ọ kachasị ibu karịa ya. Enwere ụzọ abụọ: ma ọ bụ iji belata ibu, ma ọ bụ ịzụta ihe dị ike karị.
Enwere ike ịhụ otu mgbaàmà ahụ mgbe ndị na-enye ọrụ kwụsịrị njikọ ahụ mgbe netwọk jupụtara, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji 3G ma ọ bụ 4G (Intanet Ịntanetị). O siri ike inye ndụmọdụ, ma ọ bụghị iji belata ọrụ iyi, ebe ọ bụ na ha mepụtara okporo ụzọ kachasị elu.
Dịka ị nwere ike ịhụ, nsogbu na WI-FI nkwụsị na laptọọpụ adịghị njọ. O zuru ezu iji mee ntọala ndị dị mkpa. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na netwọk gị, ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ogige, ịkwesịrị iche echiche banyere ịzụrụ ihe ntinyeghachi ma ọ bụ onye ntanetị dị ike karị.